Yakaderera Mutengo Uninsured Makiriniki - Zvinyorwa
iphone yangu haina kukunda mhete payakakiiwa
iphone skrini isina chinhu asi iri pamusoro
mashandisiro e iphone wallet
nguva yekushandisa data kutenderera
nei voicemail yangu isiri kushanda pa iphone yangu
Makiriniki evanhu vasina inishuwarenzi yehutano.
Iwe hauna uninshuwarenzi here kana kuti haugone kubhadhara kurapwa nezvikonzero zvinoverengeka? Neraki, kune makiriniki ehutano emahara uye asingadhuri . Asi nekuda kwenzvimbo dzehutano dzemunharaunda uye makiriniki emahara munyika yose , unokwanisa kutenga utano husingadhuri.
Aya makiriniki emahara uye akadhura anopa huwandu hwerubatsiro rwekurapa. Aya makiriniki ekutsvedza emitero anopa vatengi nawo asina kuvimbiswa uye avo vasina inishuwarenzi yakakwana kurapa kwakasiyana siyana. Zvichienderana nekiriniki, unogona kuwana rubatsiro kubva ku kuchengetwa kwemazino kudzora kuberekwa . Kunyangwe iwe usina inishuwarenzi, panogona kunge paine nzvimbo dzinoverengeka dzehutano dzaunogona kuwana.
Ini ndinowana sei yemahara kana yakachipa-mutengo kiriniki yehutano padhuze neni?
Kana iwe usingakwanise Medicaid kana CHIP uye haugone kuwana inishuwarenzi yehutano, unogona kuwana kurapwa. Nekushanyira kiriniki yemahara kana yakachipa yemunharaunda menyu, unogona kuwana rubatsiro rwekurapa.
Sarudzo yako yekutanga inharaunda nzvimbo dzehutano. Dzimwe nguva inonzi Federally Inokodzera Hutano Center ( FQHC ), Aya makiriniki anotungamirwa nehurumende ayo anopa masevhisi pachiyero chinotsvedza. Dzimwe nguva izvi zvinotoreva kuti kutarisirwa kuri pachena.
Aya maFQHC anosanganisira nzvimbo dzehutano dzemunharaunda, nzvimbo dzehutano dzevatorwa , matavi ehutano eruwa uye nzvimbo dzehutano dzisina pekugara. Varipo kuitira kuti avo vasina kuvimbiswa uye neimwe nzira vasingakwanise kuwana rubatsiro vave nenzvimbo yekuenda. Mune FQHC, izvo iwe zvaunobhadhara zvichave zvinoenderana neyako mari mwero.
Chivabvu tsvaga pano kuwana nzvimbo yehutano munharaunda.
Kune zvakare makiriniki emahara Munharaunda zhinji, vanozvipa vanozvimiririra varipo kunze kwenzvimbo yehurumende yekuchengetedza kuchengetedza vanhu vasina kuwana rubatsiro rwehutano pasina muripo. Pano, vanachiremba nevamwe vanozvipira nguva yavo uye masevhisi ekumhanyisa makiriniki aya.
Aya marudzi emakiriniki anowanzo shandisa chiyero chinotsvedza pakubhadhara. Izvi zvinoreva kuti vamwe vanhu vangangobhadhara chero chinhu chekuchengetwa, nepo vamwe vangabhadhara mari yezita zvichibva pane zvavanogona kuwana.
Chivabvu tsvaga pano kuwana kiriniki yemahara munharaunda menyu.
Makiriniki emahara akasununguka zvechokwadi here?
Mamwe makiriniki akazvimirira, anomhanyiswa nevanozvipira akasununguka zvechokwadi. Nekudaro, makiriniki mazhinji emahara uye ese maFQHC anoshanda achishandisa chiyero chekutsvedza kubhadhara. Naizvozvo, ivo vanove vakasununguka kushandisa kune vamwe. Vamwe, zvakadaro, vangabhadhare mari diki yekutarisirwa.
Iko kufamba-mukiriniki kunodhura zvakadii?
Kiriniki yemahara haina kufanana neyekufamba-kiriniki, inova chero mupi waunogona kuona pasina musangano. Dzimwe nguva vanhu vanoshandisa kiriniki yekurapa kwevanorwara kurondedzera vanopa kubva kunzvimbo dzekurumidziro, makamuri ekukurumidzira kumakiriniki ekutengesa.
Nzvimbo dzekuchengetedza nekukurumidza vanowanzove nachiremba kana wepakati-chikamu chehunyanzvi uyo anogona kuona varwere nguva dzese pavanenge vakavhurika. Vanowanzove nemichina yeX-ray panzvimbo iyi zvakare, uye vanogona kurapa chero chinhu kubva kumapfupa akavhunika kusvika kuzvirwere zvechivi kusvika pakupisa. Idzi inzira yekuvhara musiyano uripo pakati pevanopa rubatsiro rwekutanga uye makamuri ekukurumidzira.
Ungangoda kuti uone mutano wezvehutano nekukurumidza, asi kune chimwe chinhu chisingatenderi rwendo kuenda kuchipatara emergency room. Uye ndizvo chaizvo nzvimbo yekurumidzira yekuchengetedza iri. Zvichienderana nekuti une inishuwarenzi here kana kuti kwete, unogona kubhadhara pakati pemadhora makumi matatu nemashanu nemadhora zana nemakumi mashanu ekushanyira nzvimbo yekuchengetedza inokasira.
Kiriniki yekutengesa kiriniki yevarwere vekunze mukati mechitoro chekutengesa, kazhinji khemisi yakasununguka kana chitoro chine chitoro chemishonga. Aya makiriniki anowanzo kuve nevashandi vepakati-chikamu, senge mukoti mushandi kana mubatsiri wechiremba.
Izvo zvakagadzirirwa kuve inowanika uye inokwanisika nzvimbo yekugamuchira kuchengetwa kwezvakakosha hosha nekukuvara. Makiriniki ekutengesa anogona kunyange kupa mamwe marudzi majekiseni. Ivo kazhinji kacho anodhura kushanya pane yekukurumidza nzvimbo yekuchengetedza. Dzinenge dzinogara dzakachipa pane iyo ER. Iwe unogona kutarisira kubhadhara madhora zana nekuda kwezvirwere zvakajairika zvinounza mumwe munhu kukiriniki yekutengesa, senge zviratidzo zvechirwere.
Makamuri ekukurumidzira ari mukati mezvipatara, uye kana iwe usina inishuwarenzi, ndiyo nzira inodhura kwazvo yekufamba-famba mukutarisirwa. Kana iwe usina inishuwarenzi, unogona kubhadhara zviuru zvemadhora parwendo rumwe chete kuenda kuchimbichimbi kamuri.
Ndeapi masevhisi ayo makiriniki emahara anopa?
Nharaunda dzehutano nzvimbo Ivo vanopa prenatal care, majekiseni evacheche nevana, general primary care, uye vanogona kunyange kuendesa kutumira kune hunyanzvi kuchengetwa. Uye hongu, izvo zvinosanganisira zvinhu zvakaita sekuchengetedza hutano hwepfungwa, kushandisa zvinodhaka, uye HIV / AIDS.
Makiriniki mazhinji emahara anopa rubatsiro rwekutanga uye zvakare anotumira kana zvichidiwa. Unogona kutarisa kana aya marudzi emakiriniki munharaunda mako anogona kurapa vacheche nevana. Iwe unogona zvakare kutarisa kuti ndeapi majekiseni kana mapfuti avanogona kupa kuvana nevakuru.
Anogona emahara kana akadhura-makiriniki ehutano kunyora zvinyorwa?
Hongu. Zvekare, iwo chaiwo masevhisi kune chero emahara kana emutengo wakaderera wemakiriniki ehutano anogona kusiyana. Unogona kutarisa kuti uone kuti ndeapi masevhisi anopiwa nekutsvaga kiriniki iri padyo newe pano .
Pane mumwe munhu angaenda kukiriniki yehutano yemahara kana yakachipa here?
Kune makiriniki emahara uye akadhura, anosanganisira maFQHC, ekushandira vanhu vane mari shoma, vasina inishuwarenzi, kana vasingakwanise kuwana mabasa ehutano. Vaya vanowanzoenda kuFQHCs kazhinji havana Medicaid kana vanoda rubatsiro kusaina kuMedicaid. Kune mamwe maFQHC akasarudzwa zvakanyanya kuti ashandire vasina pekugara . Kazhinji, hapana zvakasarudzika zvinodiwa kuti uonekwe kukiriniki yemahara, zvinoreva kuti chero munhu anogona kuenda ikoko kunorapwa zvisinei nemari kana hupfumi.
MuUnited States mune mangani makiriniki emahara?
Kune zvimwe zve 1,200 makiriniki emahara kana erupo ane vashandi vanozvipira muUnited States. Uye zvakare, kune akawanda kupfuura 1,300 nharaunda dzenzvimbo dzehutano muUnited States neinopfuura 11,000 masaiti ekuendesa masevhisi pakati pavo. Chivabvu tsvaga FQHC munharaunda yako pano.
Ndezvipi zvimwe zvandingaite zvekutsvaga zvemahara kana zvakachipa?
Kana iwe uine chaicho chinodiwa chekuronga mhuri, mazano ekudzivirira kubata pamuviri uye kupa nzira dzekudzivirira nadzo, unogona kushanyira Kiriniki X yakatarwa X. Musoro X ndiyo chirongwa chekuronga mhuri inobhadharwa nemari yemubatanidzwa inoita kuti masevhisi aya awanikwe mahara kana nemutengo wezita kune chero munhu anoada. Unogona kuwana Chinyorwa X mupi pano .
Nzvimbo dzehutano dze Kurongwa Kwevabereki uye makiriniki akati wandei akazvimirira ekubvisa nhumbu nevanoona nezvehutano hwekuzvara vanopawo mabasa evakadzi ehutano, kubva pabvunzo dzePap kusvika kubvunzo dzeSTD, bvunzo dzegore uye kunyangwe kuchengetwa kwekutanga, padanho rinotsvedza.
Unogona kuwana iyo Yakarongwa Mubereki kiriniki munharaunda yako pano uye kiriniki yakazvimirira yevakadzi pano .
Usakanganwa kuti kana iwe uchida inishuwarenzi yehutano kufukidzwa, unofanirwa kutarisa kuti ndedzipi dzerubatsiro iwe rwaunokodzera muHutano Inishuwarenzi Musika.
Kubva pane zvisina purofiti kuenda kuzvirongwa zvemubatanidzwa, kune akati wandei zviwanikwa zviripo zvekuchengeta avo vangangodaro vasingakwanise kuzvipa. Kana uine mamiriro ekurapa uye uchida kurapwa, haufanire kuenda usina izvozvo.
Kubva pamabasa ehutano hwepfungwa kuenda kumishonga yekunyorerwa, kune mahara emunharaunda nharaunda makiriniki akagadzirirwa kubatsira kupa zviwanikwa zvehutano kune avo vanoshaiwa. Hutano hweveruzhinji hwakagadzirirwa kukubatsira, saka usatya kuenda kumakiriniki aya kuti uwane rubatsiro rwaunoda.
Yakawanda Sei Isina Kuvimbiswa Mazino Kuchenesa Kunodhura?
Maitiro ekuwana JOB isina PAPERS muNew York Miami ...
Rubatsiro rweHurumende rweVanaamai vasina murume muUSA
Inofambira mberi mota inishuwarenzi - zvese zvaunoda kuti uzive
ESPAVEN Enzymatic - ndeyei? Chipimo chemushonga, Zvishandiso uye ...